Taariikh ahaan, falka gacan-ka-hadalku wuxuu u muuqday fal iska caabin ah, marmar quus ah. Inta badan waxaa lagu calaamadiyaa argagixiso iyadoo ku xiran danaha dhinacyada iyo bartilmaameedyada la doortay. In kasta oo ay jiraan dadaallo badan, haddana lama helin qeexitaan guud oo caalami ah, inta badan hay'adaha ku dhaqma falalka rabshadaha wata waxaa lagu dhaleeceeyay argagixiso hal mar ama mid kale taariikhdooda. Argagixiso ayaa sidoo kale horumartay. Keliya, waxay noqotay jamac. Bartilmaameedyadeeda way kala duwanaayeen. Haddii fikradda argagixisanimadu ay inta badan tahay mawduuca muran iyo muran, sababtoo ah waxaa ka buuxa mawduuc adag oo tilmaamaya ifafaale qalafsan, isbeddelaya oo dhinacyo badan leh.
Koorasku wuxuu bixiyaa falanqaynta saxda ah oo faahfaahsan ee taariikhiga ah ee isbeddelka argagixisanimada, horumarkeeda iyo dildilaacdeeda, ka gudbiddeeda aalad dembiile oo keliya una gudubta cabbir jamac ah. Waxay ka kooban tahay: qeexitaanno, jilayaasha, bartilmaameedyada, hababka iyo agabka dagaalka lagula jiro argagixisada.
Koorasku wuxuu ujeedadiisu tahay inuu bixiyo aqoon wanaagsan iyo awood weyn oo lagu falanqeeyo macluumaadka ku saabsan arrimaha argagixisada.
Argagixisada Janaayo 17th, 2022Tranquillus
READ Joojinta heshiiska heshiiska heshiiska ee heshiiska labada dhinac: sababta ma khusayso
horeXarumaha jawaabta shilka internetka ee gobolka: samaynta qaab-dhismeedka gobollada 7
socdaBaro inaad barato Cilmiga Dijital ah iyo Kumbuyuutarka